Beyonce dia nanomana tsy nampoizina ho an'ireo mpankafy
Beyonce, mpihira malaza, dia nahagaga ny mpankafy avy amin'ny lafim-piainany vaovao amin'ny lahatsary "Formation". Ho an'ireo mpankafy, nahafatesana mahafinaritra izany, satria ny hatsarana dia tsy namoaka ny lahatsary tamin'ny 2015. Ny sary dia efa nanamarina fanantenana tsara an'arivony an'arivony tao amin'ny tambajotra.
New Orleans sy olana ankehitriny
Ny mpijery sy ny olan'ireo tsy fantatra: Ny mozika Beyonce dia mihira momba ny ady amin'ny fanavakavaham-bolonkoditra, fitaovam-piadiana, herisetra ary tsy fitoviana. Ny hetsika dia natao tao an-tanànan'i New Orleans, izay nijaly tamin'ny rivo-doza iray, tao anatin'ny iray tamin'ireo sehatra nipetrahan'ny mpihira tamin'ny fiara polisy iray feno tondra-drano. Ny horonantsary dia nahitana ny fahatsorany sy ny henjana, i Beyonce dia manohana ny rivotry ny mozika miaraka amin'ny dihy amin'ny hatsikana mahatalanjona sy ny fihetsiky ny hehy.
Ny taranaka tanora
Nankasitraka ny mpanatrika sy ny bika aman'endrik'ilay zazakely Blue Ivy, zanakavavin'i Beyonce sy Jay-Z, efa-taona. Ilay zazavavy dia nihetsiketsika nanolo-tena teo anoloan'ny fakantsary, nijery ny fotoana mitovy amin'izany raharaham-barotra sy avonavona. Ity no endriny voalohany momba ilay zazavavy eo amin'ny efijery.
Efa ho 7 febroary, i Beyoncé no hanao ny jobily Superbowl, lalao iray manan-danja indrindra amin'ny baolina amerikana. Ary raha mbola manomana ilay fampisehoana ilay kintana, dia efa nahazo salan'isa maherin'ny 5 tapitrisa ny lahatsary vaovao tamin'ny andro voalohany.
Noho izany, ny Fanabeazana Beyonce - jereo, henoy, ankafizo!
Alessandra Ambrosio dia nilaza tamim-pifaliana ny sekreteran'i Victoria, nihazakazaka teny amin'ny lampihazo tany Shanghai
Selena Gomez dia namaly tamim-pihetseham-po ny bodysheymers, izay tsy faly amin'ny tarehiny ao anaty akanjo
Iza no nankalazain'ilay Orkestra Orlando Bloom ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany?
Nanomboka nihaona tamin'ny tovovavy tanora Mariah Carey vadiny taloha!
Beckhams dia teo antenatenan'ny horohoro noho ny antoko Harper tao Buckingham Palace
Angelina Jolie sy Gwyneth Paltrow dia niampanga an'i Harvey Weinstein tamin'ny fanorisorenana ara-nofo
Moa ve i Jennifer Lopez misy resaka momba an'i Calvin Harris?
Ny masonao havanana
Diovy amin'ny loggia
Fiakaran'i Tompo - ny tantaran'ny fety
25 saka, izay 100% ny anao
Ahoana ny fomba hanaovana medaly amin'ny tananao manokana?
Mbola mifehy ny vola amin'ny mpihira ihany ny Ray Britney Spears
Ahoana ny fisafidianana ny trimmer?
Famongorana ny atody
Ny ankizy dia manaikitra - ahoana no fomba hiatrehana ilay olana?
Mifangaro "Tea Monica"
Cervicitis - fitsaboana amin'ny dingana rehetra amin'ny aretina
Okroshka amin'ny kefir sy ny mineraly
Nanafika ny nify taorian'ny nakana azy